Akanakisa VPN masevhisi: ongororo, kuenzanisa uye zvese zvaunoda kuti uzive | Linux Vakapindwa muropa
Una chaiyo yakavanzika network, kana VPN (Virtual Yakavanzika Network), ibasa rinokutendera kuti ubatanidze netiweki, seInternet, nenzira yakachengeteka. Icho chikonzero chechengetedzo yekuwedzera iyo yaanopa mukubatana kwako ndeyekuti ichavanza kwakatangira traffic, ichakupa iyo IP yakasiyana neyaunowanzove uine VPN. Iyi IP nyowani inogona kutenderana kune imwe nyika kunze kweiyo yako mavambo, iyo zvakare inopa yakawanda kutamba kune zvimwe zvikumbiro zvandichataura nezvazvo gare gare.
Zvakare, izvo zvinongedzo hazvisi zvinokuvadzwa nazvo encrypt network traffic, saka zvinodzivirira kumwe kurwiswa kwakadai seyakakurumbira MITM (Man Pakati Pakati), iyo inogona kukanganisa traffic kuti uwane ruzivo rwakakodzera. Nekudaro, senge zvese zvese, kwete zvese zvakanakira, zvakare ine kusagadzikana: inoderedza kubatana kwekukurumidza. Kunyangwe, kana iwe uchimhanyisa kumhanya uye bandwidth, haifanire kunge iri dambudziko. Kunyanya zvakadaro kana iwe uchifunga kuti mamwe maVPN masevhisi haanyanyo kunonoka kuchinjisa.
1 Zvese zvaunoda kuti uzive nezveVPN
1.1 Chii chinonzi VPN?
1.1.1 Chechitatu-bato VPN kana yako?
1.1.2 Kubatsira uye kusagadzikana
1.2 Chii icho?
1.3 Chii chaunoda kuti uzive kusarudza imwe?
2 Iwo akanakisa masevhisi eVPN
Zvese zvaunoda kuti uzive nezveVPN
Kugona sona kana iwe usingade VPN pamba kana kubasa, Kutanga iwe unofanirwa kuziva chaizvo kuti chii uye zvese zvainogona kukuitira, pamwe neakanyanya kukosha maitiro aunofanirwa kucherechedza kusarudza yakanakisa sevhisi yezvaunoda.
¿Chii chinonzi VPN? The VPN (Virtual Private Network)Seizvo zita rayo rinoratidzira, iri padandemutande yakavanzika, inowedzera zvakachengeteka iyo LAN (Yemunharaunda Network Nharaunda) pamusoro peveruzhinji network kana Internet. Iyo VPN ichabvumidza chishandiso chakabatana kutumira uye kugashira data pamusoro peiyi yakagovaniswa kana yeruzhinji network sekunge yaive yega yega network. Mune mamwe mazwi, inobvumidza ako ese akabatana zvishandiso, angave ari maPC, nharembozha, mitambo yemitambo, SmartTV, uye mamwe maIoT zvishandiso, kuti ubatanidze kunetiweki yakachengetedzeka nenhamba huru yekushandisa iyo yandichakuratidza gare gare.
Saka kuti zvishandiso zvako zvese zvakabatana kuburikidza neizvi Tunnel yeVPN iwe unofanirwa kuisa sevhisi pane yega yega yezvigadzirwa zvakabatana zvaunazvo. Dambudziko ndere kana iwe uine zvimwe zvisina iyo VPN sevhisi inowanika kune iyo chikuva kana inoshanda sisitimu, kana kungoita mudziyo wacho pachezvayo haibvumidze kuti iiswe kana kugadziridzwa mushe.
Mune ino kesi pane sarudzo inogona kukusevha, uye ndiko kushandiswa kweiyo yakakosha router. Uye ivo varipo mamwe ma routers anosanganisira VPN sevhisi. Naizvozvo, zvese zvishandiso zvakabatana neWiFi yako zvinenge zvava kutoshandisa VPN yakati, pasina kuisa kana kugadzirisa yega yega. Naizvozvo, inogona kuve yakasununguka.
Kana iwe uchifarira chero cheizvi ma routers ane VPN, iyi mimwe mienzaniso yakanaka:
D-Batanidza DIR-885L / R
Linksys WRT32X Kutamba
Ive nekuchenjerera kana uchisarudza router ine VPN! Mune mamwe mamodheru anodhura, mune rondedzero inoti iine VPN inosanganisirwa, asi inongoreva chete kune mutengi uye kwete kune inodikanwa sevha sevhisi. Naizvozvo, mune izvo kesi iwe zvakare uchafanirwa kutsvaga chechitatu-bato sevhisi ...
Chechitatu-bato VPN kana yako?
Unogona gadzira sevha yeVPN iwe pachako, kukukwirisa iwe rako pachako sevhisi kana uchida. Iyo software yechinangwa ichi ndiyo inozivikanwa OpenVPN iwe yaunogona kuwana yeGNU / Linux. Kunyangwe vazhinji vachisarudza kushandisa echitatu-bato masevhisi kuti zvive nyore uye nehumwe hunhu hwausingakwanise kuwana neyako VPN ...
Chero zvazvingaitika, kana iwe wakasarudza kuzvigadzira yako sevha VPN, unogona gadzira iyo GNU / Linux kubatana nenzira yakapusa yekubatanidza kune server yawakagadzira. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kuisa iyo network-maneja-vpnc package. Nayo zvese zvichave nyore, kunyangwe paine dzimwe nzira. Kamwe yaiswa, kubva kunetiweki yekugadziriswa kweiyo distro yako, unogona kuenda kusarudzo VPN Kubatanidza / VPN Kugadziriswa kana zvakafanana wozowedzera iyo VPN server yakagadzirwa ...
ari zvayakanakira nezvayakaipira yekuve neVPN yakajeka, uye iwe unofanirwa kuve ndiwe unoongorora kuti sevhisi yeVPN inokodzera iwe kana kwete. Kunyangwe nokutendeseka, munguva dzino uye nezvose zvinotyisidzira kunze uko, hapana zvakawanda zvinhu zvisina kukodzera kuve neVPN.
ari Zvakanakira nekuipira kuve neVPN zviriko:
Iyo inonyora yese yeInternet traffic, saka maitiro ayo anozoiswa kune ese maficha ane kubatana. Izvo zvinovasiyanisa kubva kune proxy server, uko iwe kwaunogona chete kushandisa yako webhurawuza kana mamwe maapplication ayo anogona kugadziriswa kuburikidza nekubatana kune proxy.
Iwe unogona kubatanidza uye kudimbura zviri nyore. Kana iwe uchida iyo yekumusoro network kumhanya kwechinhu uye uchida kurega kushandisa iyo VPN, zviri nyore kwazvo kuzviita. Mune sarudzo dzekumisikidza unogona kuimisikidza kana kuimisa chero nguva paunoda. Naizvozvo, hazvisi zvechigarire.
Kuwedzera kuchengetedzeka nekutenda kunyorera, kunyangwe kubva kune mashoma anovimbika maWiFi mapoinzi.
Iyo inobvumidza kuviga iyo Yekutanga / kunyepera nzvimbo yako neIP kubva kune imwe nyika. Naizvozvo, dzivisa zvakare kurambidzwa kwenzvimbo kana kudzvinyirira.
Indaneti yako (Telefónica, Vodafone, Orange, Eurona, Jazztel,…) haizokwanisi kuziva zvaunoita nekubatana kwako. Mune zvimwe zviitiko ichave iine data rezvaunoita, kunyangwe iwe uine pirated mafirimu, software, mimhanzi, nezvimwe. Iyi dhata inochengetwa kwemakore mashoma maererano nemutemo uye inogona kuita zvinopesana newe.
Mutengo (kunyange paine mahara). Uye kana ukasarudza router neVPN, unoisa izvi.
Kubatanidza kumhanya (zvimwe zvakaderedzwa nekunyorera uye kudzimisa network traffic)
Chinhu chekutanga iwe unofanirwa kuita kuve pachena ndekwekuti VPN zvine musoro here kwauri kana kwete. Nenzira iyoyo iwe unogona kusarudza kutenga imwe yeaya akabhadharwa kana emahara masevhisi. Uye zve izvi, izvo iwe zvaunofanirwa kuziva iko kunyorera iyo iyo VPN yaizove nayo:
Verenga iyo yakanaka kudhinda yeVPN sevhisi iwe yawakasarudza, sezvo bandwidth inogona kuchengetwa, matanda e data rako anochengetwa pane yavo server, nezvimwe. Kana iwe usingavimbi nebasa reVPN, zvirinani usashandise.
Chengetedza kubhurawuza data: VPN iri yakawedzera dura rekuchengetedza iyo inonyora traffic pa network. Nechikonzero ichocho chega, kunyangwe pasina chimwe cheanotevera mafomu iri yako, ingave iri sarudzo yakakosha kune vazhinji vashandisi vanoda zvishoma kuchengetedzeka, kuvanzika uye kusazivikanwa. Kunyangwe rangarira kuti VPN haiite kuti iwe urege kukuvadzwa ... Asi semuenzaniso, inogona kunge iri zano rakanaka rekuti iwe paunowanzo shandisa veruzhinji WiFi kubatana kuti ubatanidze kumabhengi masevhisi, nezvimwe, nekuti haugone kuvimba neiyo yakavhurika WiFi pasina dziviriro.
Bypass internet kudzvinyirira: pane network pane akawanda masevhisi uye mawebhusaiti asingatenderi iwe kuti uwane kwavo zvemukati kana vakaona kuti IP yako inobva kune imwe nyika. Semuenzaniso, mamwe masevhizheni masevhisi ane ekumhanyisa vhidhiyo sarudzo. Kana iwe uchida kudzivirira izvi zvinorambidzwa kana kudzvinyirira, VPN inogona kukupa iwe IP kubva kune imwe nyika mune ino sevhisi inobvumidzwa kupfuura ichi chinodzivirira chiyero. Imwe ingangoitika ndeyekuti sevhisi yepamhepo yakavharwa munyika yako nemitemo yeHurumende, mune iyo kesi, neVPN iwe unogona zvakare kuwana iro sevhisi pasina dambudziko.
P2P Kurodha pasi: Kana iwe ukakanda zvakawanda kuburikidza neTorrent kana P2P network, kuve neVPN ingangoita sarudzo yakanaka. Kwete chete kana iwe uchizviita pirati, asi zvakare kana iwe uchitsvaga zviri pamutemo. Uye ndeyekuti nenzira iyi iwe unodzivirira ivo vanozeya zvakanyanya mune zvaunoita. Zvakare, kana wako Internet Service Provider (ISP) akavharira masevhisi seP2P kurodha pasi uye ivo vasingatenderwe, uine VPN yaunokwanisa.
Telecommuting- NeVPN unogona kusanganisa network dzisina kubatana panyama. Nenzira iyi, ivo vanozokwanisa kuwana yakavanzika network uye vanoshanda pamwe nekuchengetedzeka kukuru. Naizvozvo, kana iwe ukafamba zvakanyanya uye uchida kugara uchibatanidzwa kune yako intranet yekambani, iyo VPN inogona kuve sarudzo hombe iyo inopa imwe yekuwedzera dura rekuchengetedza.
Zvino, neiyi data, iwe unofanirwa kuongorora kuti iyo VPN inogona kukubatsira. Kana iwe wafunga kushandisa imwe, muzvikamu zvinotevera une zvese zvaunoda kuti uzive ...
Chii chaunoda kuti uzive kusarudza imwe?
Zvakanaka, kana iwe wasvika panguva ino imhaka yekuti iwe unonyatsogutsikana kuti unoda VPN. Mumamiriro ezvinhu akadaro, iwe unofanirwa kufunga nezve anotevera mapoinzi ku sarudza basa rakanaka:
Sarudzo yemahara yeIP: zvakakosha zvakanyanya chete kana iwe uchida kushandisa iyo VPN kupfuudza chero chinorambidzwa kana censorship. Fungidzira kuti iwe unoda kuwana sevhisi iyo inongokutendera iwe kuti ubatanidze kubva kuUnited Kingdom. Muchiitiko ichocho, iwe uchazoda iyo sevhisi yeVPN kuti ikupe iwe neIP kubva munyika ino uye kupusa server. Iwe unofanirwa kuzvifunga nekuti mamwe maVPN masevhisi anopa IP chaiyo uye haatenderi iwe kusarudza kubva kupi. Vamwe vanokutendera iwe kusarudza nyika kubva kwaunoda kuwana IP.
Encryption algorithm- Haasi ese maVPN anoshandisa zvakafanana encryption algorithm. Kuchengetedzwa kweiyo encryption kunoenderana nazvo. Nekudaro, mazhinji masevhisi akachengetedzeka uye haawanzo sanganisira algorithms nehurema kana asina kusimba. Vazhinji vanoshandisa yakasimba AES cipher.
Speed: iwe unotoziva kuti zvinokanganisa ndiko kudzora. Kunyanya kukurumidza iwe kubata data encryption uye decryption, iyo shoma mhedzisiro iyo ichave neyako pane yako yekubatanidza kumhanya.
Privacy- Kunyangwe kuvharidzira, haasi ese masevhisi akafanana. Vamwe vanochengeta dhata mune danda pane maseva avo, kusanganisira zita rako, chaiyo IP kero, nezvimwe, kuti iwe usazombozivikanwa zvachose uye unogona kuzivikanwa Uye zvakare, mamwe masevhisi ari munyika umo mutemo unoda kuti vape data rakadai kana zvichidikanwa kune chero chikonzero chepamutemo. Vamwe vari munyika dzine mitemo yakati rebei uye havana chisungo chakadaro. Uye hechino chinhu chakakosha iwe chaunofanira kuziva:
Zvikumbiro kana zvirevo DMCA: ndicho chirevo cheDigital Millennium Copyright Act. Uyu mutemo weUnited States unotsvaga kutyora kutyorwa kwekodzero dzezvose zviri zviviri kuburitsa, kugadzira uye kugovera matekinoroji ekudzivirira copyright.
GUI uye kushandiswa: Mazhinji emasevhisi eVPN ane yakajeka graphical interface yekushandisa kuita zvese zvigadziriso uye kutanga-up maitiro. Zvimwe zvandakaedza kazhinji zvine mepu yekuti ubate nyika yaunoda kuwana iyo IP uye bhatani kuti umise kana kuimisa. Zvakareruka sekudaro. Iwe unowanzo kuwana yakaoma interface, kunyangwe iwe usingafanire kuzvitonga.
Tsigiro uye mapuratifomu: mazhinji masevhisi ane maapplication ekuita kuti kuitiswe kweVPN sevhisi yeLinux, Windows, macOS, Android, iOS masisitimu anoshanda, nezvimwe. Saka vanogona kushanda pane nhare mbozha, maPC, nezvimwe.
Rutsigiro rwehunyanzvi- Rutsigiro rwehunyanzvi rweanowanikwa VPN masevhisi zvakare ane misiyano mikuru. Vamwe vane rutsigiro zvirinani rwekubatsira iwe nezvose zvaunoda kana kana matambudziko akamuka. Muzviitiko zvakawanda vane 24/7 rutsigiro, asi kazhinji kacho inenge ichingova muChirungu chete.
Nzira yekubhadhara- Kune akati wandei marudzi ebhadharo anowanikwa eVPN. Kazhinji kadhi rechikwereti uye PayPal. Kana iwe uine maapplication muApp Store kana Google Play, unogona kubhadhara kuburikidza nawo. Kune rimwe divi, kana iwe uri paranoid nezve kusazivikanwa uye usingade kusiya trace yekutenga kwako, unogona kushandisa cryptocurrencies yakadai seBitcoin mune dzimwe nguva.
Nezvinhu izvi tichava nezvose zvaunoda sarudza yakanakisa VPN.
Iwo akanakisa masevhisi eVPN
Iye zvino zvaunofanirwa kuve nezvose zvakajeka, danho rinotevera ndere ongorora uye enzanisa akanakisa eVPN masevhisi.
Mamwe eanotevera masevhisi anotendera emahara 30-mazuva ekuyedza nguva. Nenzira iyoyo iwe unogona kuongorora kuti vanokugonesa here kana kwete.
Iyo ndeimwe yezvangu zvandinoda, uye ndeimwe yandakashandisa zvakanyanya. Iyi sevhisi yeVPN inogona kushandiswa pane akawanda madivayiri sezvazviri muchinjiko (Linux, macOS, Windows, Android uye iOS).
Izvo hazvichengete zvinyorwa zvevatengi vayo, inongochengeta iyo email yawakashandisa kunyoresa uye kubhadhara (inopa nzira dzinoverengeka dzekubhadhara dzakachengeteka). Naizvozvo, iro danho rekuvanzika rakanyanya kukwirira. Zvakare, kuti uve nerunyararo rwepfungwa, haina zvakare kukanganiswa nezvikumbiro zveDMCA. Kunyangwe ini ndisingadi kukurudzira piracy, asi zvingangoita kuti iwe urikutsvaga VPN yeiyo ... NordVPN, nekushanda kwakavakirwa muPanama inongoteerera kumatare edzimhosva kubva munyika iyoyo.
Panogona kuve nevechitatu-bato masevhisi, akadai seGoogle Analytics, Zendesk, Crashlytcs, nezvimwe, izvo zvinogona kunyoreswa.
Kana iri yekuvhara algorithm, yakachengeteka kwazvo. Zvipo dziviriro yegiredhi remauto neAES256. Uye kana iwe uine hanya nekumhanya, hazvingatarise zvakare kunetsa. Iyo ine yakanaka yekumhanyisa kumhanya nekuda kwayo kwakakwidziridzwa mutoro uye muganho wekushungurudzwa uye 6 kwakanyanya kubatana kubatana panguva imwe chete.
Kunge yapfuura, ndizvo rakakura sevhisi, rakakwikwidza mutengo. Kusiyana neiyo yapfuura, haina muganho wekubatana panguva imwe chete, saka unogona kuva neruoko rwemahara mune izvo.
Mune ino kesi, sevhisi inoitirwa muBritish Virgin Islands, saka hapana chisungo chekuchengeta marekodhi ekuvandudza ako kuvanzika uye kusazivikanwa. Ndokunge, ivo havazopa data rako kana yako ISP, saka ivo havazive kuti urikushandisa sevhisi iyi kana zvauri kuita nayo. Uye zvakare, ine yakanaka encryption algorithm, ine AES-256-GCM.
La kumhanya kunonyanya kukurumidza, hauzoona kuti une VPN inoshanda, saka mukana wakakura. Uye zvakare, inobvumidza kushandiswa kweTorrent uye kuwana kumasevhisi ekushambadzira masevhisi akadai seNetflix kubva kuUnited States, nezvimwe, izvo nemamwe masevhisi angavharwa.
Imwe yesimba rake ndeyekuti ine zviwedzero zvekushandisa zvirinyore neMozilla Firefox neGoogle Chrome, uye nemaapps eIOS, macOS, Linux, Windows, Android uye kunyangwe neAmazon FireOS.
Yakafanana neyakapfuura mbiri, ne nekukurumidza yeiyo 6 kubatana panguva imwe chete iyo inobvumidza, uye mukana wekuishandisa neTorrent neP2P pasina zvinorambidzwa.
Yayo yekuchengetedza algorithm ine encryption ye giredhi remauto kuve iwe wakadzivirirwa munzira yakasimba kwazvo, uchishandisa 2048-bit. Uye zvakare, haina kuchengetedza data kubva kumarekodhi ako, ayo ayo anoremekedza zvakanyanya kusazivikanwa kwako uye kuvanzika.
Uye zvakare, sevhisi iyi inobvumidza kupfuura geo-zvinorambidzwa nenzira yakapusa. Icho chikonzero ndechekuti inokutendera iwe Sarudza pakati peIPs kubva kunosvika makumi matanhatu nyika dzakasiyana.
Iyo inowanikwa kune akawanda mapuratifomu, akadai se Windows, Linux, macOS, Android, iOS uye zvekare nema routers, Kune avo vandakambotaura izvo zvaisanganisira mutengi asi kwete server yeVPN ...
Sekupesana ndinoda kuratidza izvozvo haina kushandurirwa muchiSpanish, kunyange izvo zvakajairika kune vamwe vazhinji futi ... Iwe unongova nazvo muChirungu.
Iyo VPN sevhisi inoitirwa kupa zvakanaka chengetedzo. Kwemari shoma iwe une sevhisi isinga gadzi matanda nezve iwe (chete iyo timestamp yekuyedza kwako kwekupedzisira chikamu), asi ine yakavakirwa muSwitzerland. Inoshanda, saka, pasi pemitemo yekutonga kwenyika ino, saka, haina kuwanikwa muparadhiso yepamutemo senge dzimwe nyaya dzakapfuura uye izvo zvingave zvakakunakira iwe. Nekudaro, kana usiri kuzoita chero chinhu chisiri pamutemo, iri basa rakanaka.
Kana a DMCA kudana Iko kudiwa hakuzoitwe kune mushandisi, chete mune iyo kesi iyo ichibva kuUnited States, ichamhan'arwa. Izvo zvakare hazvidzivise P2P masevhisi, asi inoenderana nemitemo yenyika dziripo maseva.
Nezve nzira dzekubhadhara, inotsigira kiredhiti kadhi uye PayPal, pamwe nekuzivikanwa kusingazivikanwe neBitcoins. Kune rimwe divi, iko kuchengetedzwa kwekuvharira kwakanaka kwazvo, ne AES-256 algorithm.
Kugarisana kwakanaka, nemaapplication e Windows, Linux, macOS, uye Android. Uye pakupedzisira, kumhanya kwacho kuri kukurumidza ...
Icho chimwe cheakakura masevhisi eVPN aunogona kuwana. Mune ino kesi, shandisa encryption ne AES-256 algorithm, saka zvakachengeteka. Zvakare kubhadhara kuri, nenzira dzakadai sePayPal neBitcoin.
Kana iwe uine hanya nezve zvakavanzika zvako uye kusazivikanwa, sevhisi iyi haina zvakare kunyora yako data kana chiitiko. Inoshanda muBritish Virgin Islands, uye ivo vari pasi pemitemo yeparadhiso iyi yepamutemo. Ivo vanogona kugamuchira maCACA ziviso, asi vasina dhata yemutengi, ivo havazokwanise kuvagutsa. Chete kana vaine mirairo yedare kubva kuzvitsuwa ivo pachavo vanofanirwa kuzviteerera ...
Chinhu chega chavanochengetera ndiyo kodzero yeku block traffic inoshungurudza kubva kumutengi iyo inogona kunge ichikanganisa vamwe vese vashandisi veVPN sevhisi.
Speed ​​yayo yakakwira, ine maseva munyika makumi mapfumbamwe zvakasiyana, uye inoenderana neLinux, Windows, Android, iOS, macOS, mairaira, uye zvinowedzerwa zveFirefox neChannel.
Iyo yakanaka VPN sevhisi iyo haina kunyoresa IP yako kana zvaunoita nebasa iri. Inokurumidza uye ine maseva munyika zana nemakumi mapfumbamwe. Nayo unogona kuvhura anopfuura mamirioni matanhatu mapeji ane geo-zvinorambidzwa. Izvo zvinokutendera iwe kuti uchinje IP kune iyo nyika iwe yaunoda nyore nyore.
Nezve kuenderana, ine rutsigiro rwe Linux, macOS, iOS, Android, uye Windows. Uye kana uchida VPN kuwana masevhisi ekushambadzira, neHideMyAss iwe unenge uine basa rakakura rekushandisa naro, semuenzaniso, Netflix.
Iyo zvakare yakagadzirisirwa P2P, uye ine encryption algorithm ye giredhi remauto AES-256. Iyo kumhanya kwayo, kune rumwe rutivi, haina kukanganiswa neiyi yakasimba encryption uye inokurumidza kwazvo. Tsigiro yavo yehunyanzvi zvakare yakanaka uye inogara iripo, kana paine matambudziko.
Nezve kuvanzika nemitemo, mune ino chinhu chakanyanya kuipa, sezvo chiri yakavakirwa muUnited Kingdom, uye nekudaro, pasi pemitemo yayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Yakanakisa VPN Services: Benchmarking uye Zvese zvaunoda Kuti Uzive
Ini ndinoshandisa expressionvpn uye ndinogona kusimbisa kuti ichafa, iri vpn kanoni, inodhura, imwe yezvinonyanya kudhura, asi yakakosha, zvirinani muLinux ndinoshandisa chete Linux uye muLinux ndinogona simbisa kuti zvinoshamisa, mu Android Zvakare uye mune mamwe mapuratifomu, ndinofungidzira kuti nepfungwa zvakare, asi sezvo ini ndisina kuzviedza pane mamwe mapuratifomu, hapana maonero.
Ndatenda nemaonero ako!